+17 n'ime mkpụrụokwu kachasị mma n'asụsụ anyị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
+17 n’ime okwu ndị mara mma n’asụsụ anyị
Encarni Arcoya | | Akwụkwọ, ọtụtụ
Foto - Wikimedia / Eloimanlleu
Asụsụ anyị, Spanish, nwere mkpụrụ okwu amamịghe nke asụsụ ọzọ na-enweghị isi na ya. Iji kwuo otu ihe anyị nwere ike iji ọtụtụ okwu dị iche iche ... Ikekwe n'ihi nke a, ọ na-esiri ndị ala ọzọ ike ịmụ asụsụ anyị na ahịrịokwu ya dị iche iche nke anyị nwere maka ihe niile.
Taa na Akwụkwọ ndị dị ugbu a, anyị chọrọ igosipụta asụsụ anyị ma anyị jiri ya + 17 mee ya n’ime okwu ndị mara mma n’asụsụ anyị. Nwee obi ụtọ na ha! Enwere m ọkacha mmasị m n'ime ha niile ... Ma gị?
1 Nhọrọ nke mara mma Spanish okwu
1.1 Mara mma
1.8 Ikwu okwu
1.10 Na-adịghị egwu
2 Ọzọ Spanish okwu mara mma
2.2 Enwere ike
2.13 Enweghị nsogbu
2.16 Na-efu efu
2.17 Olile anya
2.19 Mmegharị ahụ
2.23 Ihe dị mkpa
2.25 Atụmatụ aghụghọ
3 Mmalite nke Spanish
Nhọrọ nke mara mma Spanish okwu
Oké ụtọ, nro ma ọ bụ ụda siri.
Ihe dị oke egwu na enweghị ike ịkọwa ya n'okwu.
Oké siri na ìhè, ihe nke ụwa a.
Ọnọdụ ọgụgụ isi nke enweghị ịhụnanya nke otu onye nwere n'ebe onye ọzọ nọ.
Ihe ndabara na ihe a na-atụghị anya ya na-eme mgbe ị na-achọ ihe ọzọ.
Mgbe igwe ojii na-acha uhie uhie mgbe ìhè anyanwụ na-acha.
Ihe omuma anya ebe ụda nke ìhè di iche na-eke obere egwurugwu.
Nkà nke ikwu okwu nke ọma iji nwee obi ụtọ ma ọ bụ kwaga.
Nke na-adịgide obere oge.
Na ọ gaghị akpọnwụ.
Ọzọ Spanish okwu mara mma
Na-aga n'ihu, na-aga n'ihu, nke ahụ enweghị nkwụsị.
Ọ na-egosi ọchịchọ siri ike maka ihe pụtara ìhè.
Ngwongwo nke aru iji mee ka ìhè na-esighi ike pụta, mana a na-ahụ ya n'ọchịchịrị.
Mmetụta nke nhụjuanya, ịdị nro na njirimara na nrịanrịa mmadụ.
Na o nweghi ma ghara inwe njedebe ma ọ bụ njedebe.
Ọnọdụ nkewapụ ma ọ bụ ichebe iche oge ụfọdụ zuru oke.
Ike imeghari ihe di ndu nye ndi na enye nsogbu ma obu onodu ojoo ma obu onodu.
Ihe na-edoghị anya, nke dị omimi, nke dị jụụ na nke na-adịgide adịgide, nke amụrụ site na anụ ahụ ma ọ bụ omume, nke na-eme ka ndị na-ata ahụhụ ya enweghị obi ụtọ ma ọ bụ ihe ọ inụ.
Egosipụta n'ụdị ọ bụla nke mmiri mmiri.
Ìhè nke mbụ tupu ọwụwa.
Soft, pink pink na-apụta obere oge ọwụwa anyanwụ.
Ọ bụ omume nke ịbụ eziokwu na ịbụ eziokwu nye onwe gị. Onye na-akwụwa aka ọtọ bụ onye maara otú e si amata ọdịiche dị n’etiti ezi ihe na ihe ọjọọ ma na-etinye ha n’ọrụ kwa ụbọchị nke na-eduga ha irube isi na “ụkpụrụ” nke ọha mmadụ.
Ọ bụ onye na-anaghị etinye aka n’ihe ọ bụla wepụrụ ya n’ụzọ ya. Enwere ike itinye ya na ebe.
Ọ bụ otu n’ime okwu mara mma n’asụsụ Spanish n’ihi na ọ bụkwa onye anyị kacha hụ n’anya na ndụ anyị. Mana, ekwesighi ịghọta ya dị ka "nwanyị mụrụ nwa", ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị nne bụ ụmụ ha ọbụlagodi na ha amụtabeghị ha.
Ọ na-ezo aka n’inye mmadụ ihe onye ahụ nyere anyị. Ihe atụ kachasị mma n'okwu a nwere ike ịbụ ịhụnanya, ebe ọ bụ na n'etiti ịhụnanya di na nwunye bụ ihe na-emegiderịta onwe ha.
Okwu Saudade pụtara agụụ, ọ metụtara akụkọ ifo. Academylọ akwụkwọ Royal nke Spanish Spanish (RAE) kọwara ya dị ka "owu ọmụma, agụụ, agụụ." Otú ọ dị, ọ karịrị nnọọ nke ahụ.
Ọ bụ ezie na a na-eji ya na Spain (obere ihe n'ihi na ọ maghị nke ọma), ọ bụ okwu Portuguese, na n'ezie mmalite ya (na akụkọ mgbe ochie) nwere njikọ na ndị Portuguese, bụ ndị jiri ya mgbe ha nọ na mba ọzọ nke mere ọbụghị nke ha ma ụlọ nke ha na ndị ha hụrụ n'anya efunahụ ha.
Okwu "Spanish" ga - abụ "morriña" ịkọwa otu ihe.
Olileanya bụ àgwà, mmetụta nke na - eme ka ị ghara inwe okwukwe na ihe ị na - achọ ga - eme. Ma ọ bụ tụkwasị mmadụ obi (ma ọ bụ omume) inwe mmetụta ọ chọrọ.
Ọ bụ obere okwu amara, agbanyeghị, a na-eji ya na Spanish. Ugbu a, ihe ọ pụtara bụ nke "dị ọcha ma ọ bụ nwere ihe na-adịghị mkpa." Nsogbu bụ na ọtụtụ ndị na-eto eto na-eji ya n'ụzọ ọzọ, na okwu a "I mondo", nke ga-apụta ihe dịka ịchị ọchị n'ihu ọha na ihe.
Ọ bụ ịnwa ime ihe, ma ọ bụ site na mmegharị, ma ọ bụ akụkụ ahụ. Ma na-enweghị n'ezie ime ya.
Dị ka RAE si kwuo, ọ bụ nkwado, ịdị mfe, obiọma na ịkwụwa aka ọtọ, ma na omume na / ma ọ bụ omume. Ọ bụ ezie na ọ bụghị okwu 100% Spanish, n'ihi na ọ sitere na French, a na-eji ya na Spain.
Na mbu sitere na Greek, obu okwu putara onye rọrọ nrọ ma mara ihe di adi.
Okwu a pụtara enweghị ike ọgwụgwụ, ịdị jụụ. Achịkọtara ya na RAE wee si na Grik.
Onye nwere obere uche bụ onye nwere ikike ime ihe, mana na ihe ndị a enweghị obere, na ha enweghị ihe kpatara ha.
Onwere mgbe inyere gi onu? O doro anya na ị ga-eme ya, n'ihi na ọ pụtara isusu ọnụ nke mmetụta ma ọ bụ nkwanye ùgwù. N'ezie, n'oge ochie, a na-eji okwu a eme ihe n'ọtụtụ ebe, ọ na-esikwa na Latin, osculum.
Trabzon nwere ọtụtụ nkọwa ị kwesịrị ịma. N'otu aka, ọ dị ka "ọgba aghara" ga-adị. Ọ bụ ọgụ na olu ma ọ bụ omume (ụdị ọgụ na-ada ụda). Ma o nwekwara nkọwa mara mma. Ma ọ bụ na, metụtara oke osimiri, ọ bụ ihe a na-akpọ oge ahụ mgbe obere ebili mmiri gafere n'akụkụ dị iche iche wee mepụta ụda nke a ga-anụ n'ebe dị anya.
Acme anyị maara ya maka kichin ika na-egosi na katuunu. Mana acme, sitere na Greek, bụ onye RAE matara ma ọ pụtara oge kachasị ike, ma ọ bụ oge njedebe nke mmadụ.
Jipiar abiaje mgbochi, mkpu, akwa; ya bu, anyi n’ekwu okwu banyere ihe ngwaa ndi ahu. Ma, ọ pụkwara ịpụta ịbụ abụ dị ka ude.
Ugboro ole ka ha gwara gi na "akwa" ya na h na v. Ugboro ole ka ha ga-aka akara n’amaghị na e nwere okwu, na o sitere na Latin, na ede ya n’enweghị h yana b. Ee ee, uebos dị. Nsogbu ya bụ na ọ pụtaghị otu ihe ahụ bu nke gara aga, mana ọ bụ iji zoo aka na mkpa.
Okwu a dị ịtụnanya pụtara ịnwe amamihe, nka na ihe ọjọ. Nke ahụ bụ, onye maara otu esi arụ ọrụ na ndụ ya n'ụzọ gara nke ọma.
Mmalite nke Spanish
E nwere ọtụtụ puku okwu na Spanish. Kpọmkwem, na RAE karịrị 93.000 okwu a ghọtara (afọ 2017), na kwa afọ okwu ọhụrụ gụnyere (ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọzọ na-apụ n'anya).
Ọ bụ mmadụ ole na ole maara n'ezie mmalite Spanish, ma ọ bụ Castilian, yana okwu ndị mebere ya. Mana na anyị ga-edozi ngwa ngwa.
Ma ọ bụ ya anyị maara na Spanish si na Latin, dị ka ọ dị na Portuguese, Catalan, Galician, French, Italian ma ọ bụ Retro-Roman. Dị ka ị maara, Rome meriri ihe ka ukwuu na mpaghara Iberian Peninsula na, mgbe alaeze a dara, ọ bụ ezie na Latin efunahụ, n'eziokwu ihe mere bụ na ọ ghọrọ asụsụ ọhụrụ, nke a na-akpọ «Castilian romance», nke gbasapụrụ site na Alaeze nke Castile ruo na mpaghara dum dịịrị inwa Na-emepechabeghị Anya.
N'ezie, nke a bụ ebe Spanish si, site na Latin ka njọ, nke a na-efu dị ka Alaeze Ukwu Rom funyụrụ n'ala ndị Spain. Agbanyeghị, ọ bụghị "Latin" n'ihi na ọ nabatakwara okwu sitere n'asụsụ ndị ọzọ, ọkachasị Grik, German, ma ọ bụ Celtic.
N'ezie asụsụ Spanish bidoro n’afọ 1200, ọ bụkwa Eze Alfonso nke I ji ụgwọ, onye n'okpuru iwu ya malitere ide akwụkwọ na Castilian, na mgbakwunye na ịtụgharị ọtụtụ ndị ọzọ n'asụsụ Spanish ahụ, wee si otú a nyere aka mee Castilian asụsụ "gọọmentị" nke Spain.
Eziokwu bụ na, ọ bụrụ na anyị eleghachi anya azụ, ọtụtụ okwu Spanish ochie furu efu n'ihi iji, ọtụtụ ndị ọzọ amachaghị anyị, na mgbe ụfọdụ anyị na-eji okwu nwere ihe pụtara ihe dị iche na ihe anyị chọrọ ikwu. Nke n’enye anyi echiche otu Spanish siri gbagwoju anya.
N’ime okwu niile a, olee nke kachasị gị mma? You nwere nke ọzọ na - esoghi na ndepụta a ma masịrị gị karịa?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » +17 n’ime okwu ndị mara mma n’asụsụ anyị
Ekele, ekele dị ukwuu maka edemede ahụ. Bara uru, ọ bụ ezie na ugboro ugboro na weebụ (ọbụlagodi akụkụ mbụ, okwu 10 kachasị mma).
M na-esonye na okwu a, maka otu ihe kpatara ya, abụ m onye na-asụ asụsụ na enwere m ọrụ ọkachamara na-enye ndị ọzọ ihe maka mpaghara m. Ọfọn, ezigbo Carmen, ejiri m nkwanye ugwu na-atụ aro ka ị kọwaa nkọwa gị na mbipụta gị, maka okwu pụrụ iche, ọ bụ okwu ahụ bụ "limerencia", nke enweghị nkwado nke ịdị adị na asụsụ Spanish, na ntụle Enwere naanị mbipụta na weebụ, ebe e nwere nsụgharị ọjọọ nke asụsụ Bekee na nke okwu si na-atụgharị uche, nke bụ "limerence" na nke naanị e zoro aka na akparamaagwa na ihe ọ bụla ọzọ, dị ka ma Dictionary nke Spanish Language , ma ọ bụ Dictionary of Americanism na-agụnye ya; Nke a pụtara na ọ bụghị akụkụ nke asụsụ Spanish n'okpuru ọnọdụ asụsụ ọ bụla, mana ọtụtụ peeji weebụ na-ekwu oke ya na isiokwu ị bipụtara.
Na mmechi, okwu a bụ "limerencia" abụghị akụkụ nke asụsụ Spanish, n'ihi na ọ nweghị ọkachamara n'ọzụzụ mmụta asụsụ enyego ya, ma a ga-agbakwunye ya na DLE. Ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụ karịa mkpụrụokwu nke onye ọrụ weghaara nke ọma na web (gụnyere ode akwụkwọ nke edemede na Wikipedia).
Ya mere, m na-arịọ ka a ghara ịtụle nkọwa m dị ka nkwupụta ma ọ bụ omume mpako, kama dị ka aro sitere n'aka onye na-asụ asụsụ ahụ.
Zaghachi Jairo Rodríguez
Ezigbo nkọwa. Obi ekele.
Zaghachi Ricardo Medina
Na mgbakwunye na ezigbo ọmarịcha nkwanye ugwu Jairo Rodríguez kwuru, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ịmara na okwu ọzọ pụtara ìhè n'isiokwu ahụ, dịka Resilencia, abụghị nke a, kama ọ bụ Resilience ka e dere ...
Zaghachi Luis Duque
Echere m na e nwere okwu hiere ụzọ.
Ọ bụ nkwụghachi, ọ bụghị nnwale. Leta m na-efu efu. Ma ọ bụ otú ahụ ka m chere.
Ekele na ekele maka ịkekọrịta oghere a.
Onwuka Onyekwena dijo
Ọ dị ezigbo mma, ana m ekele gị, agbanyeghị, m na-ekwe ka m mee nchọpụta, ihe ziri ezi bụ Resilience, not Resilence, dị ka ekwuru ebe a; ewezuga nke ahụ, mbipụta a na-eweta afọ ojuju.
Zaghachi Marc Moreno
Okwu m kachasị amasị m bụ nefelibata, nke ọma, abụ m nwoke na-arọ nrọ nke na-asụ ngọngọ mgbe niile n'eziokwu ...
Domingo Villar. "Oké osimiri na-amasịkarị m"